युरोकपमा आज समूह चरणका ४ खेल हुँदै - Kantipath.com
युरोकप फुटबलमा आज चार खेलहरु हुँदैछन् । समूह चरण अन्तर्गत आज समूह ‘बी’ र समूह ‘सी’ को समान दुई दुई खेल हुनेछन् । समूह ‘बी’ मा रहेको बेल्जियमले फिनल्याण्डसँग खेल्नेछ । बेल्जियम र फिनल्याण्डबीचको खेल राति १२:४५ बजे सुरु हुनेछ ।
बेल्जियम यस अघि नै नकआउट चरणमा पुगिसकेको छ । अघिल्ला दुई खेल जितेको बेल्जियमले ६ अंक जोडेको छ । फिनल्याण्ड पनि बेल्जियमलाई हराएर अन्तिम १६ मा पुग्न चाहन्छ । फिनल्याण्ड २ खेलमा ३ अंक जोडेर समूहको तेस्रो स्थानमा रहेको छ ।
अर्को खेलमा रुसले डेनमार्कसँग खेल्नेछ । दुई टिमबीचको खेल राति १२:४५ बजे सुरु हुनेछ । रुस २ खेलमा ३ अंक जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ । रुस आज डेनमार्कलाई हराएर नकआउट चरणमा पुग्न चाहन्छ ।
समूह ‘सी’ अन्तर्गत नेदरल्यान्ड्सले नर्थ म्यासेडोनियासँग खेल्नेछ । दुई टिमबीचको खेल राति ९:४५ बजे सुरु हुनेछ । नेदरल्यान्ड्स यस समूहबाट नकआउट चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । अघिल्ला दुई खेलमा नेदरल्यान्ड्सले लगातार जित निकालेको थियो । नर्थ म्यासेडोनिया अंक विहीन रहदै पुछारमा रहेको छ । म्यासेडोनियाले अघिल्ला दुबै खेल गुमाएको थियो ।
समूह चरण अन्तर्गत युक्रेन र अष्ट्रिया भिड्ने छन् । युक्रेन र अष्ट्रियाबीचको खेल ९:४५ बजे सुरु हुनेछ । आज दुबै टिम जित निकाल्दै नकआउट चरणमा पुग्न चाहन्छ । युक्रेन २ खेलमा ३ अंक जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ । अष्ट्रिया २ खेलमा ३ अंक जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ ।
Previous Previous post: कति कमाउँछन् पोर्नस्टार? यी हुन् सबैभन्दा धनी
Next Next post: कास्कीमा निषेध आदेश केही खुकुलो बनाउँदै एकसाता थप
राष्ट्रिय फुटबल प्रशिक्षकद्वारा राजिनामा घोषणा : एन्फा उपाध्यक्षको किचकिच प्रमुख कारण
३४ खेलमा अपराजित इटाली युरो च्याम्पियन : रोनाल्डोलाई गोल्डेन बुट
इंग्ल्यान्ड र इटाली वेम्बलीमा भिड्दै : १६ औं युरोकपको उपाधी कसको पोल्टामा ?
मेस्सीको कप्तानीमा अर्जेन्टिनाले उचाल्यो कोपा अमेरिकाको उपाधी
कोपा उपाधीका लागि भिड्दै दुई महारथी : कसले मार्ला बाजी ?
कोपा अमेरिकामा कोलम्बिया तेस्रो : पेरू पराजित
नेपाल कोपा पुमा यू—१२ फुटबलमा सहभागी हुने
पाथीभरा गोल्डकप फुटबल : शसस्त्र प्रहरी सेमिफाइनल पुगे
प्रथम विदुर नगर कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि नुवाकोट युनाइटेड फुटबल क्लबलाइ !
रोनाल्डो बने सामाजिक सन्जालमा सर्वाधिक कमाउने खेलाडी
इंग्लिस प्रिमियर लिग : लिभरपुलको लगातार तेस्रो जित
रोनाल्डिन्होले सन्यास फिर्ता लिए